Izvo zvisikwa zveMaison Décotterd zvinopembererwa neG Glion Institute yeDzidzo yepamusoro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Izvo zvisikwa zveMaison Décotterd zvinopembererwa neG Glion Institute yeDzidzo yepamusoro
Mwedzi mitatu mushure mekunge Stéphane Décotterd ajoina Glion Institute yeDzidzo yepamusoro, iyo yakawanda-mubairo Chef pamwe neyakaremekedzwa yekugamuchira vaeni chikoro chikoro inopemberera kugadzirwa kwaMaison Décotterd. Maison Décotterd inzvimbo yegastronomic ine nzvimbo nhatu dzakasarudzika kusanganisira iyo gastronomic Restaurant Stéphane Décotterd nemaonero ayo anoshamisa paGeneva Lake; iyo Bistro naDécotterd, iyo chic brasserie; uye iyo Lounge Bar naDécotterd nemidziyo yayo inonaka uye sarudzo yewaini negirazi.
Iwo maresitorendi maviri akatanhamara, ari mune yaimbova Hotera Bellevue muGlion, anogamuchira chiono cheMichelin-nyeredzi chef Stéphane Décotterd chiono chechikafu chemunharaunda, chinogara chiripo, uye chepakutanga. Mukuremekedza uzivi hwake, anotungamira timu yake kuburikidza nekuvandudza nguva dzese, kudzoreredza makodhi e gastronomy. "Chikafu changu chine dunhu, chinogadzikana uye chepakutanga, asi chiri kungogara chichiitika, semvura yedziva iri inondikurudzira zvakanyanya," anodaro Stéphane Décotterd.
Kubva 2016, Stéphane Décotterd anoverengera mubrigade rake mudiki Pastry Chef Christophe Loeffel, akahwina mibairo ya "Chef Pâtissier wegore ra2021" kubva kuGault & Millau Switzerland ne "Bronze Dessert 2020" kumakwikwi eFrance emunyika yemadhishi. Nguva pfupi yadarika akapinda mumakwikwi e "Patissier des Jahres" muCologne, Germany, ndokupedza ari pechipiri. Iye anovimbisa mudiki Pasiki Chef akatogadzira siginecha yake, achishanda nejometri, magadzirirwo, uye nyore. “Ini ndinogara ndichiedza kuwedzera kubata kwekutanga uye kutaura nyaya nezvigadzirwa. Ndinoisa kukoshesa kukuru kuratidza tsika dzandinozviwana, kushandisa zvigadzirwa zvemudunhu, ”anodaro Christophe Loeffel.
Muimba yekudyira, sevhisi inosimbiswa naStéphanie Décotterd, Director weMaison Décotterd, nechikwata chake. Anonunura sevhisi nemasaini akakwana, nepo aine maitiro akasarudzika, achipa muenzi chiitiko chisingakanganwiki. Kuzvipira uku kugona uye kugona, zvakabvumidza Stéphanie kuhwina mubairo wekutanga weMichelin weSwitzerland wekugamuchira vaenzi nebasa, muna Kukadzi 2019.
Chibvumirano chekugona, Maison Décotterd anofara kuve chikamu che Castles ataure kushamwaridzana, kujoina network ye580 yakasarudzika emahotera nemaresitorendi pasirese, varidzi uye vanoshandiswa nevanozvimiririra vemabhizimusi vane hunyanzvi nezvehunyanzvi hwavo uye vakazvipira zvakanyanya mukuumba hukama hunodziya, husingaperi nevashanyi vavo. Kungofanana nechikafu chaStéphane Décotterd nefilosofi, nhengo dzeRelais & Châteaux dzinochengetedza nekusimudzira hupfumi nekusiyana kwetsika dzepasirese dzekugamuchira nekugamuchira vaeni, kuve nechokwadi chekuti vanoramba vachibudirira. Ivo vakazvipira zvakaenzana kuchengetedza nhaka yemuno uye nharaunda, sezvakataurwa muChiratidzo chesangano chakapihwa UNESCO munaNovember 2014.
Glion vadzidzi vanobatsirwa zvikuru kubva pakagadzwa maviri masiginecha maresitorendi kuGlion kambasi, ichivapa iwo matsva ekudyira zviitiko pamwe nemukana wakasarudzika wekudzidza kubva kune akasarudzika ekugadzirira matarenda, kubatsirwa kubva kwakasarudzika kudzidziswa mukicheni, sevhisi, uye bhawa. Panguva imwecheteyo, iwo masasa eSwitzerland eGlion akagadziridzwa kuti awedzere kuwedzera ruzivo rwevadzidzi.